Tun Tun's Photo Diary: Universal Studio Singapore
စင်ကာပူနိုင်ငံ Sentosa ကျွန်းပေါ်မှာ Universal Studio ဆိုတာ ကို ၂၀၁၀ လောက်က ဖွင့်ခဲ့ပါတယ်။ ဖွင့်ပြီး ၁နှစ်လောက်ကြာမှ ကျွန်တော်ေ၇ာက်ဖူး တာပါ၊ အခု ပုံတွေက ၂၀၁၁ ဂျူလိုင်လ လောက်က၇ိုက်ထားတာပါ။ ၀င်ကြေး က တစ်ယောက် ကို $70 လောက်ပေးရပါတယ်။ အဲ့တုန်းက Mastercard promotion ရှိလို. $60 လောက်ပဲ ကျတယ်။ အသက် ၆၀ ကျော် လူကြီး တွေ ဆို၇င် $40 လောက်နဲ. ၀င်လို.ရပါတယ်။ တချို.လဲ စလုံးမှာ နေတာ ကြာပေမယ့် မေ၇ာက်ဖူးတဲ့သူတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ ကျွန်တော်လဲ ၀င်ကြေး ဈေးကြီးလို. မသွားဖြစ်ဘူး။ အခုမှ မြန်မာပြည်က အလည်လာတဲ့ မိသားစု ကို လိုက်ပို.လို.ေ၇ာက်ဖြစ်တာ။ေ၇ာက်ပြီး တစ်ခေါက်ပါပဲ။ နောက်တခါ ဆို မသွားတော့ဘူး။ လက်မှတ်အလကား ၇ရင်တော့ တမျိုးပေါ့။ :P
အတွင်းပဲ ခဏ ၀င်ကြည့်ချင်တဲ့ သူတွေ အတွက် ညနေပိုင်း $5 တန် လက်မှတ် ဆိုတာ ရှိသေးတယ်။ ကိုယ်တိုင် မ၀ယ်ဖူးတော့ မသိဘူး။ သူများတွေ ပြောတာတော့ အဲ့ $5 တန် လက်မှတ် က ညနေပိုင်း မှောင်ခါနီး အထဲဝင်ကြည့်ပြီး ဓါတ်ပုံ၇ိုက်လို.၇တယ်။ စင်ကာပူေ၇ာက်တုန်း Universal Studio ကိုေ၇ာက်ဖူးတယ် ဆိုပြီး fb မှာ ဓါတ်ပုံတင်ပြီး ပြချင်တဲ့ သူတွေ အတွက် $70 ကုန်စ၇ာ မလိုဘူး ဆိုတာ ပြောချင်တာပါ။း)
In this post, I will bring you to the Universal Studio Singapore which was open to public on 2010. I have visited this place back in 2011 July with my family. The ticket costs about $70 per head. On that day, if you pay by Mastercard, you will get 10% discount. For those who are above 60 years old, the ticket price is much more cheaper.
There arealot of things to see inside the Universal studio which is not included in my post. As it was3year ago, I couldn't find some of the photos (probably lost). For me, I am not crazy about this kind of place. In my opinion, this place is more for the kids and teenage girls. Please enjoy the rest of the photos.
Next post will cover Water World show & Jurassic Park.
စင်ကာပူ မြို.ပြ ၇ူခင်းတွေ ကို ပြချင်လို. အိမ်ကနေ ဘတ်စကားစီး ပြီးသွားပါတယ်။ Vivo City မှာ ဆင်းပြီး Universal Studio ကို Train စီးသွားပါတယ်။ အဲဒီ Train က Vivo city ကနေ Sentosa ကျွန်းကို သွားတဲ့ Train ပါ။ အသွားအပြန် လက်မှတ် $3 ပါ။ အခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ လမ်းလျှောက်သွား၇တဲ့ တံတား ဆောက်လိုက်ပါပြီ။ တံတားကနေ သွား၇င် Sentosa ကျွန်းကို ၀င်ကြေး $1 သာပေးရပါတယ်။
ဒီကမ္ဘာလုံးကြီးက Universal Studio အပြင်ဘက်မှာ ပါ။ အဲ့အေ၇ှ.မှာ ဓါတ်ပုံ၇ိုက်ဖို. ၀င်ကြေးပေးစ၇ာ မလိုပါဘူး။ :) အဲနားမှာ လက်မှတ်ဝယ်ပြီးတော့ အထဲကို ၀င်ပါတယ်။ အဲ့တုန်းကတော့ ဖွင့်ထားတာ မကြာသေးတော့ လူတော်တော်လေး စည်ပါတယ်။
ဓါတ်ပုံ အ၇ိုက်ခံရတာ ၀ါသနာပါသူတွေ အတွက်တော့ အထဲမှာ ဓါတ်ပုံ၇ိုက်ချင်စ၇ာ အ၇ုပ်တွေ အပြင်အဆင်တွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ ကျွန်တော့ အတွက်တော့ ဘာမှ ထူးထူးခြားခြား ၇ိုက်စ၇ာ မ၇ှိပါဘူး။ ကလေးတွေ ။ ဆယ်ကျော်သက် ကလေးမ လေးတွေ တော့ အ၇မ်းကို သဘောကျမယ့် နေ၇ာပါပဲ။
ဒီလို ကပြ ဖျော်ဖြေတဲ့ အဖွဲ.တွေလဲ ရှိပါတယ်။ ဒါက မနက်ပိုင်း ကတာပေါ့။ ညနေပိုင်းကျတော့ ယောင်္ကျားလေး အဖွဲ့ ကတာ တွေ.ခဲ့ပါတယ်။ အနောက်နိုင်ငံကိုေ၇ာက်သွားသလိုမျိုး ဖြစ်အောင် ကတဲ့သူတွေကို အဖြူတွေ ငှားထားပါတယ်။ ဇာတ်၇ုံထဲမှာ Live concert လို လုပ်ထားတဲ့ ဖျော်ဖြေမူလဲ ရှိပါတယ်။ ဓါတ်ပုံ မ၇ိုက်၇ ဆိုလို. ဓါတ်ပုံတွေ မ၇ိုက်ခဲ့၇ဘူး။ အဲ့ဒီ Live concert ကတော့ ကြည့်လို.ကောင်းတယ်။
ဒီ Egypt အိမ်ထဲမှာ roller coaster လိုဟာမျိုးရှိတယ်။ စီးဖို. တော်တော်လေး တန်းစီ၇တယ်။ အစက အထဲမှာ ၇ထားငြိမ့်ငြိမ့်လေးစီးပြီး လျှောက်ကြည့်၇မယ် ထင်လို. တစ်မိသားစုလုံး တန်းစီးသွားတာ။ အထဲေ၇ာက်မှ roller coaster လိုဟာမျိုး မှန်းသိတော့ အသက်ကြီးတဲ့ လူတွေ ကို ပြန်ထွက်ခိုင်း ပြီး အပြင်မှာ စောင့်ခိုင်း၇တယ်။ အထဲမှာ တေ်ာတော်မှောင်တယ်။ သ၇ဲကား စီးသလိုပုံစံမျိုးပေါ့။ ဒါပေ့မယ့် သူက roller coaster လို အတက်အဆင်း ကြမ်းတယ်။ တန်းစီ၇တာနဲ.တောင် မတန်ဘူး။ စီး၇တာ ခဏလေး၇ယ်။ လန်.တာ နဲ. မျက်လုံးမှိတ်ထားလို. ဘာမှန်းတောင် မသိလိုက်ဘူး။ နောက်မှ youtube ကနေ သူများတွေ video ၇ိုက်ထားတာ ပြန်ကြည့်ရတယ်။ :P
ဒါကတော့ Hollywood မှာ ၇ုပ်ရှင် ဘယ်လိုရိုက်သလဲ ဆိုတာ ပြတဲ့ show ပါ။ Studio လိုပုံစံမျိုးပေါ့။
ရုပ်ရှင်ထဲမှာ ပါတဲ့ effect တွေ (မီးလောင်တာ။ ပေါက်ကွဲတာ။ မိုး၇ွာတာ။ မိုးကြိုးပစ်တာ) ကို ဘယ်လို လုပ်တယ် ဆိုတာ ပြထားတာပါ။ စိတ်ဝင်စားဖို.တော့ ကောင်းပါတယ်။ Sound effect တွေ လဲ အ၇မ်းကို ကောင်းပါတယ်။ ၀ုန်း ကနဲ. ဒိုင်းကနဲ။
ဒါကတော့ New York မြို.လို လုပ်ထားတဲ့ လမ်းထင်တယ်။ New York က တိုက်တွေ လို ပုံစံ တူ ဆောက်ထားပါတယ်။ အဲ့မြို.ကိုေ၇ာက်သွား သလိုလို ဘာလိုလိုပေါ့။
ဒီ roller coaster အကြီးကြီးက ၀င်ကြေးလက်မှတ် ထဲမှာ ပါပြီးသားလား။ ပိုက်ဆံ ထပ်ပေးပြီး စီး၇မှာလား မသိပါဘူး။ တော်တော်ကြီး ကို ကြီးပြီး တော်တေ်ာကြောက်စ၇ာ ကောင်းမယ့် ပုံပဲ။ စီးတဲ့ သူတွေကို တော်တော်လေး ချီးကျူးမိပါတယ်။ ကိုယ်တိုင် မစီးရဲလို.ပါ။ ၀တဲ့သူတွေ ပေးမစီးဘူး လို.လဲ ကြားဖူးပါတယ်။ ဘန်ကောက်က Dream World မှာ တခါ စီးကတည်းက တော်တော်လန်.သွားတယ်။ :P
အချိန်တွေ ပိုနေတာ နဲ. ဒီကလေး စီးတဲ့ ကားကို စီးပါတယ်။ ပေးထားတာနဲ.တန်အောင် စီးတာပါ။ အင်မတန်ပျင်းဖို.ကောင်းပါတယ်။ :P
ဒီ Far Far away ဆို တဲ့ castle ကြီးထဲမှာ 4D movie လိုဟာတွေ ကြည့် ခဲ့သေးတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၃နှစ်လောက် ၇ိုက်ထားတာဆိုတော့ တချို.ပုံတွေ ပြန်၇ှာလို. မတွေ.တော့ဘူး။ နောက်ပြီး Madagascar ဆိုတာလဲ ရှိသေးတယ်။ ကာတွန်း၇ုပ်တွေ I Love to move it ဆိုတဲ့ သီချင်းနဲ. ကတာ လေ။ ကလေး အကြိုက်ပေါ့။ အဲ့ဒီ Madagascar မှာ ပဲ လှေစီး တဲ့ နေ၇ာ ရှိပါတယ်။ ကိုယ်တိုင် လှေစီးခဲ့ပေမယ့် ရိုက်ထားတဲ့ ပုံတွေ ရှာမတွေ.တော့ဘူး။
Show တွေ အကုန် ကြည့်ပြီးတော့ ညနေ မှောင်မှ အပြင် ကို ပြန်ထွက်ပါတယ်။ တနေကုန် လည်ခဲ့တယ် ဆိုပါတော့။ ခဏ လောက်ပဲ ၀င်ကြည့်မယ် ဆို၇င် $70 လောက်ပေး၇တာ မတန်ဘူး လို.ထင်တယ်။ အထဲမှာ အစားအသောက်တွေ ဈေးကြီးတယ်။ တချို.တွေ ဆို အပြင်ကနေ မုန်.တွေ ၀ယ်လာပြီးစားကျတယ်။
နောက်ပို.စ်ကျရင် Universal Studio ထဲက Water World show နဲ. Jurassic Park မှာ ၇ိုက်ခဲ့တဲ့ ပုံတွေ တင်ပါ့မယ်။
at 5/01/2014 01:46:00 AM